आर्थिक Archives - Page2of 356 - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
पूँजीगत खर्च कम भएकोमा संसद समितिको चासो
३ चैत्र २०७५, आईतवार २१:०३ अर्थकोअर्थ
काठमाडाै, ४ चैत । संघीय सदनको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्गत अर्थ समितिले पूँजीगत खर्चको मात्रा कम भएका विभिन्न सात मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्ने भएको छ । आज बोलाइएको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल […]
३ चैत्र २०७५, आईतवार ००:४४ अर्थकोअर्थ
बलराम बुढाथोकी काठमाडौं ३, चैत । पुरानो बसपार्कमा बन्न लागेको २२ तले काठमाडौं भ्युटावर निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सर्तमा वि.सं. २०७२ सालमा जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकाई कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरे अनुुसार समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ला जस्तो […]
अर्थविद्हरु भन्छन–सम्मेलन गर्दैमा विदेशी लगानी आउदैन
२ चैत्र २०७५, शनिबार २३:१४ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३ चैत । अर्थविद्हरुले लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी लगानी नआउने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद्हरुले विदेशी लगानीमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र […]
२ चैत्र २०७५, शनिबार २३:०६ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३ चैत । मानव संशाधन पूँजीलाई विकसित एवं सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजित १२ औं संस्करणको मानव संशाधन भेला सम्पन्न भएको छ। दुई दिन सम्म चलेको भेलामको नारा ‘प्रविधिको युगमा मानव संशाधन’ तय गरिएको थियो । मानव संशाधनका विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता सहभागी भएका थिए । तीन सय भन्दा बढि मानव संशाधन पेशाकर्मी […]
नागरिक लगानी कोषद्वारा प्रभातफेरी आयोजना
२ चैत्र २०७५, शनिबार २२:५५ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ३ चैत । नागरिक लगानी कोषले २९ औं वार्षिकोत्सवको पुर्व सन्ध्यामा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरेको छ । कोष परिसरबाट शनिबार बिहान कोष संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र भट्टराई, संचालक समिति सदस्यहरु डा.रामशरण खरेल, चन्द्र सिंह साउथ, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल तथा कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल सहितको ¥याली माइतीघर मण्डलामा पुगेर पुनः कोष परिसरमा आई समापन भएको […]